Qalabka ugufiican iyo qalabka khadka tooska ah ee shirkadaha safarka iyo dalxiiska sanadka 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Qalabka ugufiican iyo qalabka khadka tooska ah ee shirkadaha safarka iyo dalxiiska sanadka 2021
Jebinta Wararka Yurub • Jarmalka Jebinta Wararka • Boostada martida • Warshadaha Warshadaha • News • Technology • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Wararka kala duwan
Habka ugu fiican ee ballansashada internetka
Dunida tiknoolajiyadda sare ee maanta, softiweerka iyo qalabyada dhinac saddexaad ayaa ka caawiyay ganacsato badan inay kor u qaadaan suuqgeynkooda iyo taageerada macmiilka iyagoon u baahnayn inay shaqaaleeyaan dad badan.
Sababtoo ah isbadalka dhijitaalka ah, aaladaha noocan oo kale ah ayaa codsi ballaaran ka hela warshadaha safarka iyo dalxiiska.
Regiondo waxay sheegaysaa inay abuurtay habka ugu fiican ee ballansashada ee khadka tooska ah isla markaana ay hordhac u siisay Nidaamyada Buug -gacmeedka ee Regiondo ee socdaallada iyo waxqabadyada.
Waxaan weydiinay koox ka mid ah hawl wadeenada dalxiiska waxyaabaha ku saabsan aaladda internetka ee aysan ku noolaan karin la'aanteed.
Regondo waxay la wadaagaysaa natiijooyinkooda si ay uga caawiso ganacsiyada inay u shaqeeyaan si hufan oo ay si wanaagsan isugu xirnaadaan.
Nidaamyada ballansashada waxay bixiyaan xal softiweer ah oo u oggolaanaya macaamiisha suurtogalka ah inay ka sameystaan ​​jaale khadka tooska ah iyada oo loo marayo boggaaga iyo kanaalada kale. Laakiin waa kuwee kuwa ugu fiican suuqa?
Waa kan soo bandhigidda Regiondo:
Waxaa laga yaabaa inaan xoogaa dhinac u xaglin, laakiin waxaan jecel nahay wax soo saarkeena oo aan si adag u shaqeynaa si aan u hubino inaan ku bixin karno xalka ugu wanaagsan ee ballansashada suuqa.
Waxaan ka bilownay safarka Regiondo sanadkii 2011 magaalada Munich, Jarmalka, waxaanan la shaqeynay in ka badan 8,000 oo dalxiis oo fantastik ah iyo bixiyeyaasha waxqabadyada adduunka ilaa iyo markaas.
Macaamiishaada iyo shaqaalahaagu waxay jeclaan doonaan naqshadda Regiondo. Way fududahay in la raaco si aad si toos ah ugu boodo adiga oo aan wax tababar ah qaadan.
Dhib malahan haddii aad iibiso 50 ama 500,000 tigidh sanadkii, Regiondo waxaa loo dhisay si noloshaada loo fududeeyo. Khibradayada iyo astaamaha horumarsan ayaa ku habboon maaraynta mugga weyn.
Software -ka Regiondo wuxuu la socdaa dhammaan ballansashadaada. Iibinta khadka tooska ah, onlaynka, iyo lammaanaha ayaa si fudud loo duubi karaa, loo kaydin karaa, loona lafaguri karaa.
Maxaa loo doortaa Regiondo?
Dhammaan boosaska hal nidaam oo kaa caawinaya:
• Kordhinta Iibka • Keydso Kheyraadka • Maareynta Hawlgallada
✓ Ku noolaanshaha maareynta alaabada waqtiga-dhabta ah
✓ Maareynta kheyraadka oo la isku halleyn karo
✓ Waxaan kaa caawineynaa inaad si dhaqso leh u korto adiga oo aan kharashyada maalgashiga
✓ Waxaan nahay madal ugu fiican mugga sare ee jaale
✓ Waxaan leenahay interface user dareen leh.
✓ Waxaan ku siineynaa kantarool buuxa muuqaalka iyo dareemaha dukaanka tigidhada internetka.
✓ Kooxda raacitaanka iyo taageerada ee had iyo jeer diyaar u ah inay ku caawiyaan.
✓ Barnaamijkeena waxaa loo habeeyay isbeddelada
✓ Ku xirmaan OTA-yada ugu waaweyn hal guji
Ma rabtaa inaad aragto Regiondo oo ficil ah? Buuxi foomkayaga si aad u codsato demo -gaaga bilaashka ah iyo socdaalka alaabta!
FareHarbor waxay abuurtaa aalado awood leh oo ka caawiya dalxiis iyo hawl wadeenada howlahooda inay si fudud oo hufan ugu shaqeeyaan ganacsigooda. Waxay bixiyaan softiweer ballansasho onlayn ah iyo kheyraadka shirkadaha dalxiiska iyo waxqabadka.
Iyada oo ay joogaan koox jecel hibo-jecel, xubno luqado badan leh oo ka kala yimid daafaha dunida, Fareharbor waxay ballan-qaadday inay kaa caawineyso inaad koraan.
Maxaad u dooranaysaa FareHarbor?
Heer-ganacsi, adeegsade saaxiibtinimo oo la-soo-cusboonaysiiyay
✓ Taageero 24/7 oo lagu daray tababar shaqsi oo hal-qof ah.
✓ Waxaan wareejin doonaa ballansashadaada mustaqbalka waxaanna cusbooneysiin doonaa degelkaaga.
Ku ballaadhi gaadhitaankaaga kanaallo qaybinta oo dhisan
✓ Waxaan nahay shirkadda ugu dhaqsaha badan kobcinta dhaqdhaqaaqa iyo warshadaha dalxiiska
Si aad u hesho demo toos ah oo aad u aragto sida FareHarbor kuugu shaqayn karto, si fudud buuxi foomka shabakadooda.
Bokun waa shirkad TripAdvisor bixisa Mashiinka Booska ee Online -ka ah, Maareynta Kanaalka, Alaabada & Maareynta Kheyraadka, Goobta Suuqa B2B, Warbixinta, iyo Shabakadaha ee meheradaha dalxiiska iyo dhaqdhaqaaqa.
Maxaad u dooratay Bókun?
Waxaan kaa caawinaynaa inaad bilowdo oo aad kobciso meheradahaaga tamashlaha & hawlaha.
✓ Hel boos celin badan: ku iibiso kanaallo badan intaad rabto, macaamiishana adduunka oo dhan la gaadho
Time Wakhti badbaadi: kordhiso kartidaada oo maaree hawlgaladaada ganacsi hal meel kaliya
Kobci ganacsigaaga: sahamiyaan fursadaha si aad u kobciso qaybintaada, u kordhiso wax -soo -saarkaaga, oo aad u dhisto durdurro dakhli oo cusub ganacsigaaga
Haddii aad rabto inaad bilowdo isticmaalka Bókun waxaad u baahan tahay si fudud u saxiixo tijaabadooda bilaashka ah.
Checkfront waa barnaamij maareyn ganacsi oo daruur ku salaysan oo loogu talagalay hawl wadeennada dalxiiska, shirkadaha kirada, iyo bixiyeyaasha hoyga.
Maxaad u dooranaysaa Checkfront?
Marna ha seegin ballan kale: Qaado ballansashada websaydhkaaga waqti kasta, meel kasta oo leh helitaanka jadwalka tooska ah ee jawaabta leh
✓ Nabad gal xaashiyaha: la soco jadwalkaaga, maaree boos celisyada iyo helitaanka, oo hel fikrad waqtiga-dhabta ah ee meheraddaada oo dhan iyada oo loo marayo dashboard dhexe
Load Culeyskaaga shaqada kala bar ka dhig: si otomaatig ah u hagaaji hawlahaaga soo noqnoqda
Checkfront waxay bixisaa 21 maalmood oo tijaabo bilaash ah markaa haddii aad xiisaynayso inaad marin u hesho astaamahooda iyo taageeradooda, kaliya abuuraan xisaab. Ma jiro kaarka deynta loo baahan yahay.
Redzy waa softiweer ballansasho madax -bannaan iyo madal qaybinta, oo loogu talagalay Dalxiisayaasha & Hawl -wadeennada Wax -qabadka.
Maxaad u dooranaysaa Redzy?
✓ Si otomaatig ah hawlaha ganacsiga
✓ Gacanta gacanta iyo shaashado badan
✓ Hal-gujin hal abuur website
✓ Warbixin ganacsi oo heer sare ah
✓ Abuuritaanka martida
✓ Isdhexgalyo Badan: (Zapier, ExpressAdvisor Review Express, Dukaanka Facebook & inbadan).
✓ Heerarka waqtiga-dhabta ah iyo maaraynta qiimaha
Si aad isbedelkaaga ugu bilowdo Redzy waad iska diiwaangelin kartaa iyaga maxkamad bilaash ah. Ma jiro kaarka deynta loo baahan yahay.
Trekksoft waa xalka ugu weyn ee ballansashada ee Shirkadaha Dalxiiska Maalinta.
Maxaad u dooranaysaa Trekksoft?
Ell Iibi safarro badan adiga oo isku xira iibkaaga hore iyo kan dambe
Operations Maamul hawlaha iyada oo si otomaatig ah loo maamulayo iyo hawlaha gacanta
✓ Kobci ganacsigaaga adoo ku xiraya macaamiisha aduunka
Si aad uga codsato demo kooxdooda horumarinta ganacsiga, kaliya waa inaad u baahatid jadwalka wicitaanka demo.
Aaladaha CMS waxay siiyaan xal la awoodi karo oo sugan milkiilayaasha doonaya inay koontaroolaan boggooda internetka oo ay maamulaan dhammaan waxyaabaha ku jira gudaha. Aynu ogaanno kuwa ugu sarreeya 3 CMS xulashooyinka hawlwadeennada dalxiiska.
WordPress waa nidaamka ugu caansan ee bilaashka ah ee bilaashka ah iyo nidaamka furan ee maareynta maareynta. Waa adeegsi-saaxiibtinimo, gebi ahaanba la-beddeli karo, oo aad u fudud in la barto. WordPress, waxaad ku dhisi kartaa degel, bilaabi kartaa baloog, xitaa waxaad ku iibin kartaa khadka tooska ah.
Maxaad u dooran kartaa WordPress?
✓ WordPress waa free, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso kharashka martigelinta
✓ Way fududahay in la isticmaalo oo la barto; looma baahna aqoon sireed
✓ WordPress wuxuu ku siinayaa xakameyn buuxda ee mareegahaaga; waa mid aad loo habeyn karo, waxaadna si buuxda gacanta ugu haysaa goobtaada iyo dhammaan xogtaada
✓ Awooddeeda baloogga waa la dhisay waana fududahay in la isku daro
✓ Waxaad si fudud u fidin kartaa shaqeynta goobtaada oo leh plugins
✓ Kumanaan la awoodi karo (qaar ka mid ah oo bilaash ah) mawduucyo la beddeli karo ayaa laga heli karaa internetka
Websites Website -yada WordPress waa SEO saaxiibtinimo iyo jawaab celin
✓ Waxaad marin u leedahay barnaamijyada moobiilka ee maareynta goobtaada socdaalka
✓ Nidaamku wuxuu bixiyaa maareyn warbaahin oo awood leh
✓ Waxqabadka sare iyo amniga
Si aad u bilawdo boggaaga ama balooggaaga, abuuro koonto WordPress.com!
Squarespace waa nidaamka maareynta maadada oo dhan-mid-ah oo bixisa dhisme degel, martigelin, iyo xalka E-commerce.
Maxaa loo doortaa Squarespace?
✓ Waa mid ka mid ah kuwa wax dhisa degellada ugu fudud in la isticmaalo
✓ Mawduucyada websaydhka-dhamaadka sare ayaa loo heli karaa noocyada kala duwan ee websaydhyada kuwaas oo ka mid ah faylalka, baloogyada, bogagga degitaanka, iyo dukaamada internetka
✓ Dhisay SEO
✓ Isticmaalaha fudud ee adeegsadaha
SSL bilaash ah Certificates
✓ Naqshadeynta jawaabta ee daawashada moobiilka
✓ 24 / 7 Taageerada Macaamiisha
✓ E-Commerce isku dhafan
Ku ku bilow Squarespace, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato shaybaar ku habboon ganacsigaaga ka dibna abuura koonto. Iskuxirka MAYA yeelo qorshe lacag la'aan ah marka mar haddii mareegahaagu diyaar u yahay in la bilaabo waxaad u baahan tahay inaad qorshe qaadato oo aad iska qorto.
Webflow waa xalka isku dhafan ee u dhexeeya qalabka dhismaha websaydhka dhaqameed sida Squarespace, nidaamyada maareynta maadooyinka caadiga ah sida WordPress, iyo bogagga internetka ee sirta adag lagu qoro (ama websaydhada aan ahayn CMS).
Maxaad u dooranaysaa Webflow?
✓ Dhammaan hal madal oo isku dhafan CMS, aaladaha suuqgeynta, keydinta, iyo inbadan
✓ Webflow wuxuu ku siinayaa xorriyad aad ku abuuri karto degello gebi ahaanba habaysan: isku hagaaji wax kasta oo ka socda raad-raac illaa saf-dheer iyo cusboonaysii tusaale kasta oo midab ah ilbiriqsiyo
✓ Shiraac gebi ahaanba muuqaal ah taas uma baahna codayn kasta
✓ Jiid oo hoos u dhig shaqada dhise bogga
✓ Waxaad si fudud u abuuri kartaa animations iyo isdhexgal
✓ Naqshadeynta bogga jawaabta
✓ Websaydhyada websaydhku waa SEO saaxiibtinimo
✓ Ku casuuma tifaftirayaasha iyo iskaashatada inay ku daraan oo ay dib u eegaan waxa ku jira mareegahaaga
✓ Xalka martigelinta xoogga leh
✓ SSL bilaash ah Certificates
✓ Bilaash ilaa aad diyaar u tahay inaad bilowdo
Si aad u sahamiso madal, kaliya waxaad u baahan tahay inaad is -qoritaanka koontada Webflow -ka ee bilaashka ah.
Qalabka iibku wuxuu kaa caawinayaa inaad hagaajiso nidaamkaaga oo aad kobciso dakhliga adoo ilaalinaya dhammaan macluumaadka macaamiisha si ammaan ah loo kaydiyo loona abaabulo. Akhriska sii wad si aad u sahamiso kuwa ay adeegsadaan bixiyeyaasha dalxiiska iyo waxqabadyada.
Apollo waa xog-u-horrayn ka-qaybgal xog oo kaa caawisa fulinta, falanqaynta, iyo hagaajinta istaraatiijiyadaada kobaca.
Maxaad u dooratay Apollo?
✓ Apollo wuxuu kaa caawinayaa inaad garaacdo lambarkaaga
✓ Raadi rajooyinkaaga ugu habboon iyo hoggaamiyeyaasha cusub
✓ Ku orod emayl & wac ololeyaal
✓ Samee shirar
✓ Falanqee oo wax ka beddel habkaaga
✓ BILAASH qorshe iyo kombiyuutar demo
Diyaar ma u tahay inaad tijaabiso Apollo? Gali emailkaaga shaqada iyo u bilow BILAASH. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa hel DEMO si loo arko sida Apollo uu uga caawinayo shirkadaha inay dhisaan hannaan lagu celcelin karo oo loogu talagalay dejinta shirarka, xiritaanka dakhliga, iyo falanqaynta xeeladaha iibka iyo suuqgeynta.
Qwilr waa softiweer websaydh casri ah softiweer leh iskudhafyo iyo arrimo kala duwan. Waad abuuri kartaa soo-jeedin soo jiidasho leh oo kaa caawineysa inaad xirto heshiisyo badan.
Maxaad u dooranaysaa Qwilr?
✓ Samee soo jeedinno caadooyin ah hal guji adiga oo aan ka tagin CRM -gaaga
✓ Si toos ah uga soo jiid xogta qiimaha CRM -kaaga
✓ Qwilr wuxuu bixiyaa soo jeedino badan oo hore loo sameeyay oo xiiso leh iyo maktabad ka kooban qaybo dib loo isticmaali karo si loo abuuro soo jeedin heer sare ah oo u dhiganta tilmaamaha astaantaada
✓ Waad abuuri kartaa salaan is-dhexgal fiidiyow ah, daraasad kiis, ama soo bandhigid alaab
✓ Waxaad ku caawin kartaa iibsadayaasha xisaabiyaha ROI is -dhexgalka iyo xigashooyinka la beddeli karo
✓ Falanqaynta bogga oo faahfaahsan ayaa la heli karaa
✓ Waad ku dari kartaa oggolaanshaha elektaroonigga ah
W Qwilr ayaa ku caawinaya automate qaansheegta waxayna ku xirnaan kartaa nidaamyada lacag-bixinta ee kala duwan
Waxaad isku dayi kartaa Qwilr BILAASH ama ka codso demo bilaash ah websaydhkooda - kaliya iska qor koontada Qwilr.
Aaladda suuq geynta
Qalabka suuqgeynta otomaatiga ah ayaa kaa caawinaya inaad si hufan u shaqeyso adiga oo waqti kuu badbaadinaya iyo inaad hore u abaabusho ololahaaga. Aynu hubinno kuwa ugu fiican ee u shaqeeya shirkadaha safarka iyo dalxiiska.
Mailchimp waa madal otomaatig ah oo suuqgeyn caan ah oo bixisa suuqgeyn emayl, dhisme degel, iyo adeegyo xayeysiisyo dhijitaal ah. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad isu keento xogta dhagaystayaashaada, kanaalada suuqgeynta, iyo aragtiyaha.
Maxaad u dooratay Mailchimp?
✓ Ka dhiso e-mayl, xayeysiisyada bulshada, bogagga degitaanka, kaararka boostada, iyo inbadan oo hal meel ah
✓ Aaladaha qaabeynta qaab fudud ee loo adeegsado iyo qaabab jilicsan oo emaylladaada, bogagga degitaanka, iyo foomamka
✓ Kaaliyaha hal-abuurka leh ee ku shaqeeya AI si loo abuuro naqshado caadiya
✓ Dhammaan macluumaadkaaga iyo fikradahaaga hal meel dhig
Support Taageero 24/7 ah taageero abaalmarin ah
✓ 250 + isdhexgalka barnaamijka si loogu xiro dhammaan qalabkaaga Mailchimp
✓ Buugga macluumaadka ee faa'iidooyinka lagu kalsoon yahay
Waxaad awoodi kartaa ku bilow MailChimp websaydhkooda ka dibna xitaa soo degso barnaamijkooda mobilada ee Android ama macruufka. Waxaa jira qorshe lacag la'aan ah - waxaad u diri kartaa ilaa 10,000 oo emayl bishii iyo 2,000 maalintiiba bilaash.
Caddayntu waa aaladda ugu habboon ee lagu dhisi karo kalsoonida astaantaada. Waxay ku soo saareysaa daaqad websaydhkaaga oo muujinaysa quud toos ah ama tirada guud ee dadka dhabta ah ee dhowaan tallaabo qaaday ama booqday goobtaada. Adigoo ku daraya mashiinkaaga suuqgeynta waxaad u beddeli kartaa ilaa 300% booqdeyaal badan hoggaamiyeyaal, demos, iyo iibin.
U Adeegso Caddaynta:
Ku abuuri yaraanta Tirada Booqdaha Tooska ah
Ku dhis kalsooni leh Hot Streaks
Kor ugu qaad kalsoonida Hawlaha Dhawaan
Maxaad u dooranaysaa Caddayn?
✓ Si sahlan loo sameeyo
✓ Dejinta macaamiisha
✓ Falanqeyn qurux badan
✓ Isdhexgalka Zapier
✓ Degdeg ah xawaaraha load degdeg ah
✓ A / B imtixaanka
Waxay hadda bixiyaan 1 bilood BILAASH - waxaad u baahan tahay oo keliya inaad rakibto 'pixel marketing pixel' boggaaga (waa sidee) oo arag haddii ay kuu hesho iibin badan.
Buffer waa aalad jadwal u sameynta warbaahinta bulshada oo ay adeegsadaan in ka badan 75,000 oo meheradood oo adduunka ah. Ka sokow isku -duwidda ololahaaga, waxaad isticmaali kartaa Buffer si aad u cabbirto ugana warbixiso wax -qabadkeeda oo aad gaarto.
Maxaad u doorataa Buffer?
✓ Qorshee oo jadwal ku samee sheekooyinkaaga 'Instagram' mareegaha ama moobaylka
✓ Ku xir “xiriiriyahaaga noolaha” URL -yo badan oo lagu arkay bogga wax laga iibsan karo
✓ Ku dar faallooyinka ugu horreeya markaad jadwal geliso qoraallada Instagram
✓ Abuur, keydi & abaabul hashtags si aad ugu isticmaasho qoraaladaada 'Instagram'
✓ Ku dar goobtaada iyo summadaha isticmaaleyaasha markaad jadwal u sameysato barta Instagram
✓ Cabbir waxqabadka sheekooyinka, qoraalo shaqsiyeed, iyo hashtags
✓ Dhis warbixinno caadiya oo si fudud ula wadaag kooxdaada
✓ Ku raaxeyso a BILAASH qorshe
Jawaabo u hel su'aalaha guud ee ku saabsan istiraatiijiyaddaada warbaahinta bulshada
Haddii aad rabto inaad sahamiso astaamaha waaweyn ee Buffer kaliya soo qaado qorshe ku habboon baahiyahaaga iyo bilow tijaabadaada bilaashka ah.
Ugu dambayn laakiin ugu yaraan diiradeennu waxay ku dhacdaa aaladaha maareynta mashruuca. Xakamaynta dhammaan hababka iyo qulqulka shaqada ayaa muhiim u ah bixiyeyaasha socdaalka iyo waxqabadka. Qalabyada maareynta mashruucuna waxay ka mid yihiin siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu hubin karo in dhammaan habraacyada si adag loo raaco. Intaa waxaa dheer, waxay aad ugu fiican yihiin in kooxda la habeeyo iyadoo la kordhinayo waxqabadkooda.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan nidaamyada maareynta maareynta maaddada goobta shaqada ee bixiyeyaasha dalxiiska iyo hawlwadeennada.
Asana waa shabakad la adeegsan karo oo codsi moobiil ah oo loogu talagalay inay ka caawiso kooxaha abaabulka, raadraaca, iyo maaraynta shaqadooda.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad u kala jabiso mashaariicdaada iyo howlahaaga soo noqnoqda ee hawlo la maareyn karo, mid walbana leh taariikhda ay ku egtahay, subtasks, wakiillo, iyo astaamo kale.
Iyadoo ay Guddiyada Kanban, Asana hadda waa ka sii dabacsanaan badan tahay si aad u habayso socodka shaqadaada sida ugu macquulsan ee ganacsigaaga. Fiiri fiidiyaha hoose:
Maxaad u dooranaysaa Asana?
✓ U abaabul shaqadaada mashaariic la wadaago sida liisaska ama guddiyada Kanban
✓ Arag isbaarooyinka muhiimka ah ee mashruucaaga si loo cabbiro loona wadaago horumarka
✓ Sii hawlaha milkiile cad, si qof walba u ogaado cidda mas'uulka ka ah
✓ Hawlaha u kala qaad Subtasks iyo Sections
✓ Ku habee mashaariicda meelaha gaarka loo leeyahay
✓ La xiriir howlaha gudahooda
✓ Cusboonaysiinta mashruuca
✓ Ku dheji Asana barnaamijyada kale.
Waad iska qori kartaa Asana.com oo waxaad u adeegsan kartaa qalabka bilaash ah ilaa 15 xubnood oo kooxda ah. Astaamaha horumarsan qaarkood way xiran yihiin laakiin waxaad heli doontaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku bilowdo qorshaha bilaashka ah. Waxa kale oo jira nooc mobilada loo heli karo oo loogu talagalay Android iyo iOS si loola socdo waxyaabaha socda.
Si la mid ah Asana, Trello waa goob loogu talagalay maaraynta mashruuca kooxda. Si kastaba ha ahaatee, diiraddeeda ugu weyni waxay saaran tahay guddiyada kanban iyo sahlanaanta isticmaalka.
Maxaad u dooranaysaa Trello?
✓ Fududeyn muuqaal ah oo fudud iyo waxqabad jiitaa-iyo-dhibic dareen leh
✓ Awoodda isdhexgalka ee xoogga leh - isku dar qalabka shaqada ee ugu sarreeya
✓ Otomaatiga no-code
✓ Fududee isgaarsiinta fudud ee kooxaha
✓ Kaararka waxaa ku jira dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay
Tani waa waxa aan u isticmaalno Gobolkado si aan ula socono shaqadeena guud ahaan shirkadda. Iyadoo ay ka shaqeeyaan in ka badan 50 shaqaale ah, waxaan u adeegsanaa Trello inaan ka wada shaqeyno mashaariicda waaxyaha kala duwan si aan si hufan ugu dhisi karno una howlgelin karno nidaamkayaga ballansashada ee internetka.
Si aad u bilowdo wadashaqeynta iyo maaraynta mashaariicdaada Trello, si fudud iska qor emailkaaga shabakadooda.
Monday.com waa shabakad kale oo la beddeli karo iyo madal maaraynta shaqada guur -guura iyo beddel caan ah oo Asana ah. Waxaa adeegsada Adobe, Wix, Universal, Walmart, iyo magacyo kale oo badan oo caalami ah.
Maxaad u dooranaysaa Isniinta?
✓ Way fududahay in la isticmaalo - si dhakhso ah u samee guddiyada mashruuca
✓ Faa'iido leh oo sahlan in la raaco casharro laga heli karo saldhigga aqoonta
✓ Guddiyada Shaqsiyadeed iyo kuwa Dadweynaha
✓ Xiriir wax ku ool ah iyo ogeysiisyo lagu fulinayo hawl (dadka calaamadee oo hel ogeysiisyada markii la calaamadeeyay)
✓ Waxaad kaga tagi kartaa faallooyinka tooska ah muuqaalada
✓ Waad nuqul ka sameysan kartaa oo ka dhejin kartaa Adobe
✓ Falanqaynta Heerka Sare iyo Warbixinta
✓ Taageero ayaa la heli karaa dhammaan macaamiisha oo kaliya maahan macaamiisha caymiska
Haddii aad xiisaynayso Isniinta, kaliya raac xiriirinta si aad ugu bilowdo dhowr talaabo oo fudud
Qalabka software-ka ee loogu talagalay loona isticmaalo warshadaha safarka ayaa caan ku ah sabab. Waxay ka caawiyaan kumanaan meheradood inay qabtaan wax ka sarreeya oo ka sarreeya waxa ay ka filayaan maalin kasta.
Waxaan rajeyneynaa xulashadeenu inay kaa caawiso inaad ka hesho kuwa saxda ah safarkaaga ama shirkadda waxqabadka isla markaana ugu dambeyntii hagaajiso isdhexgalka macaamiishaada iyo howlaha gudaha.